Maproblems ese disappear – Makuhwa.co.zw
Maproblems ese disappear
KANA tikati maproblems ese disappear, Mwari vobva vati newewo uri problem inofanirwa kuita disappear, unoita disappear uchienda kupi?
Yasvika nguva yezororo reEaster. Sekutaura kwakaitawo mumwe munhu, usafarise paEaster, ndiJesu akafa akamuka, iwe ukafa haumuke!
MuHarare mune chipata-pata chevanhu vari kumhanya-mhanya vachitenga nekugadzirira kunoona hama neshamwari. Vanhu vese ava, kusanganisira iwe, vari kuratidza kuti vagashira zororo reEaster. Kugashira kwedu zuva reEaster kwandifungisa kugashirwa kwakaitwa Jesu paakapinda muJerusarema akatasva mwana wembongoro. Vanhu vakafarira Jesu zvekumuwaridzira hembe dzavo munzira yaaifamba. Vakaridza mhururu vakapembera zvekubvaruka vachishevedzera kuti, “Hosana,” zvinoreva kuti “Tiponesei.”
Asi pasina nguva, vanhu vamwe chete ivavo vakanga vachifarira Jesu samambo vakangoerekana vamupandukira. Vakange vave kuita sevamwe vanhu vasingamuzive.
Pirato paakanongedzera Jesu achibvunza vaJudha kuti ndoita sei nemurume uyu, vakashevedzera kunge huro dzichatsemuka, uku tsinga dzakati tare tare kumeso nemutsipa vachiti, “Ngaaroverwe pamuchinjikwa.” Vakanga vambofarira nekumugamuchira vaye, vakanga vazara ruvengo uye votaura kuti Jesu ngaafe.
Newe handizive kuti paEaster pano uri kurutivi rwupi. Asi ndinongofunga kuti uri kurutivi rwevanogashira Jesu nemufaro. Ichokwadi, handidi kufunga kuti uri kudivi revaye vanoti Jesu ngaaurayiwe, ngaaroverwe pamuchinjikwa. Asi hameno zvazvinombotiita, nekuti dzimwe nguva tinombowanikwa tiri kudivi rekufarira Jesu.
Ndipo paye patinenge tichitaura chokwadi, kwete manyepo. Ndipo paye patinenge tichinzwira vamwe tsitsi, tichivabatsira, tichida vamwe, tichirega kungozvifunga isu chete, asi tichizvininipisa, tichiitira vamwe mwoyo munyoro, uye murefu.
Munguva dzakadai, tinenge tichipemberera Jesu, tichimugamuchira.
Asi dziripo nguva dzatinopfeka zviso zvembada. Ndidzo nguva dziye dzatinonyenamirana tichiratidzana mazino akatesva kunge minzwa. Nguva idzodzo tinenge tave mhuka, zvikara zvesango zvinoruma nekuparadza.
Ndidzo nguva dzatinotuka zvituko zvinobaya mwoyo nekuchemedza vatiri kutuka. Ndidzo nguva dzatinonyengedza, tichiita hupombwe, tichiba, tichirwadzisa vamwe nekuzvinzwa kunge takareba kudarika gomo reKilimanjaro riri kuTanzania. Nguva idzodzo tinorovera Jesu pamuchinjikwa. Tinoshevedzera kuti “Jesu ngaafe.”
Ndizvo zvinoita kuti Jesu paakafa musi weChishanu, zuva iroro rinzi Good Friday. Asika hapana good kana munhu afa, kunyanya watinenge tichiti ngaafe.
Asi kufa kwaJesu kwakaita good nekuti kwakanga kuri kufa kwekuti ini newe tigokwanisa kuzoona Mwari kana tichinge tafa. Jesu akafa, asara kufa ndiwe! Asi handizive kuti pauchafa uchafa uchiziva kuti Jesu paakafa akanga atokufira kare kuti iwe kana wazofa urege kufa, asi uve nehupenyu husingapere here.
Jesu paakafa, akativhurira musiwo wekuti tiende kudenga kuna Mwari, ngatichirega kuvhara musiwo iwoyo, asi ngatipinde naye.
Panguva ino yeEaster pamuri kuimba kuti maproblems ese disappear, zivai kuti doro nechipfambi hazvipedze matambudziko. Kudya mari nekufarisa hakuite kuti maproblems aite disappear. Asi kana ukaramba nyika, woda Mwari – unenge watanga kupedza maproblems. Kwete nekuti kuna Mwari kune mari neminana yadai kutekeshera, kwete, asi nekuti kuna Mwari unogona kufa asi worega kufa.
Panguva ino yeEaster, usabve pachokwadi. Nekuti kubva pachokwadi nyangwe zvishomashoma kunogona kukurasa kunge bhini rebepa rabvarurwa nembwa.
PaEaster ino, hakusi kuronga kwedu kunotiratidza kuti takapenga kana kuti hatiite. Haasi maparty nekudhakwa kana chipfambi – asi chokwadi cheshoko raMwari chete.
Related Topics:Maproblems ese disappear
Ginimbi to get a new Rolls Royce
Mwana wekutorwa neshiri mutano